Alaab-bixiyaha alaabta alaab-gacmeed ee AASraw tayada alaabta AASraw
Tayada waxsoosaarka AASraw
AASraw waxay inta badan bixisaa alaabta ceeriin ah oo loogu talagalay xannuunada anabolis, daroogada lumis miisaanka, daawooyinka galmada galmada, SARMS, PCT (daaweynta wareega dambe), hormoonada haweenka iyo daawooyinka kale ee la xiriira. Alaabadaas oo ay ku jiraan alaabooyinka ugu caansan suuqa, sida Anavar, Winstrol, Anadrol, Dianabol, Taxosterone taxan, Taxanaha Trenbolone, Boldenone taxan, Nandrolone taxane, Methenolone Series, Drostanolone Series, Estradiol Series, Cialis, Viagra, Vardenafil, Anavafil, Flibanserin , Sibutramine, Orlistat, Clomid, Halotestin, Femara, Trestolone Acetate, Ibutamoren, Testolone, Ligandrol, Cardarine, Ostarine, Clenbuterol, Modafinil, Pregabalin, Dymethazine, Yohimbine, iwm.
Tayada AASraw, halheyskeenna ah "Alaabooyinka Genius waa la arki karaa" macnaheedu waa. Loogu talagalay steroids khibrad leh waxay u karisaa ama milkiileyaasha shaybaarrada la kariyo, ka soo baxa muuqaalka iyo urta iyo jilayaal kale oo muuqaal ahaaneed, waxay u sheegi karaan in alaabtu yihiin kuwa caqli badan ama kuwa xun. Laakiin si looga caawiyo qaar ka mid ah gacmaha cusub, Dhammaan alaabada ceyriinka ah ee laga helo AASraw waxaa loo damaanad qaaday nadiif ahaanta wax aan ka yarayn 98%, inta badan alaabtu waxay la socdaan daahirnimo 99%. Waxaa jira warbixinada baaritaanka HPLC iyo COA oo ah taageerada aasaasiga ah ee balanqaadkeena. Iyo, waxaan ku dhiirrigelinaynaa macaamiisheenna la soo iibsaday inay ku tijaabiyaan budada cayriin shaybaarradooda maxalliga ah waxaanan bixin karnaa kharashka la xiriira.
Ugu dambeyntii, AASraw waxay kugula talineysaa dadka isticmaala steroids in ay ku sugnaadaan caafimaad leh sifo sare leh steroids qalabka ceeriin. Labadaba ha isticmaalin hoos-u-dhac ama xad-dhaaf ah ma fiicna. Si aad u hesho kuwa saxda ah, si looga fogaado khatarta aan loo baahnayn.